Android 7.0 Nougat Onye Mmepụta Preview 5 dị maka nbudata | Akụkọ akụrụngwa
Google-aga n'ihu ịbanye na ome osooso na ụnyaahụ na eze ulo oru Gam akporo 5 Nougat Mmepụta Preview 7.0, a na-ewepụta ụdị nyocha gam akporo 7.0 kachasị ọhụrụ tupu usoro ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ wepụtara. Maka ugbu a, onye ọrụ ọ bụla nke gam akporo Beta Mmemme ga-enwe ike ịwụnye ma nwalee ya na ngwaọrụ ha site na nbudata ngwanrọ ahụ ugbu a.
Akụkọ anyị na - ahụ n’ụdị beta ọhụrụ nke gam akporo Nougat na - enye anyị ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, mmelite na njirimara ọhụụ, nke ga-adị nnọọ ka ndị anyị nwere ike ịhụ na nsụgharị ikpeazụ nke enwere ike ịmalite ọrụ na ụbọchị ole na ole sochirinụ ma ọ bụ n'ọtụtụ izu.
Dị ka ọ mere n'oge gara aga, gam akporo 7.0 Nougat Preview 5 dị maka nbudata na Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9 na Pixel C. Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime ọdụ ndị a, ị nwere ike ibudata ya site na njikọ nke ị ị ga-ahụ na njedebe nke isiokwu a. N'ezie nbudata bụ n'efu.
Tupu launching iji wụnye gam akporo 7.0 Nougat Preview 5 Buru n'uche na anyị na-eche ihu a ikpe mbipute na na dị ka ọ bụla ikpe mbipute nke ọ bụla software ọ nwere ọtụtụ chinchi, nke Google n'onwe ya ghọtara, na a ga-edozi ya, na-atụ anya, na mbata nke mbipụta ikpeazụ na ahịa.
Maka ugbu a, ọ bụ oge iji nwaa ihe Google kwadebeere anyị maka ụdị nyocha gam akporo 7.0 ọhụrụ a, yabụ anyị anaghị anabata gị ọ bụla ma anyị ga-akwadebe Nexus iji nye gị akụkụ ọhụụ nke gam akporo.
Tinyelarị gam akporo 7.0 Nougat Preview 5 na ngwaọrụ Nexus gị?.
Budata - Gam akporo 5 Nougat Mmepụta Preview 7.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Android 7.0 Nougat Onye Mmepụta Preview 5 dị ugbu a maka nbudata
Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere iPhone ọhụrụ na atụ anya ya